'Ugibe lwezemvelo' lungabulala iphengwini lase-Afrika | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-penguin yase-Afrika ibanjwe 'ogibeni lwezemvelo' olungayifaka engozini. Ukondla nokuphila, kuya esimisweni semvelo sasolwandle saseBenguela, okuyilapho kuze kube manje kwakukhona ukudla okuningi; Noma kunjalo, ukudoba ngokweqile okwenziwe amashumi eminyaka kanye nokuguquka kwesimo sezulu kunciphise inani lezinhlanzi.
Ngokwesifundo esashicilelwe kulo magazini Biology yamanje, lezi zinyoni ziqala ukuba nenkinga enkulu yokuya phambili.
Ithimba labaphenyi abavela eNyuvesi yase-Exter (e-United Kingdom) naseKapa (eNingizimu Afrika), ngokubambisana nabamele isayensi abavela kuHulumeni waseNamibia naseNingizimu Afrika, balandele ama-penguin angama-54 amancane ase-Afrika aqhamuka kumakholoni ayisishiyagalombili ahlakazekile e umucu osuka eLuanda (e-Angola) uye empumalanga yeKapa leGood Hope (South Africa).
Ukuguquka kwesimo sezulu kanye nomthelela womuntu emvelweni yasolwandle kubangela eziningi zalezi zinyoni ezincane ukuthi zingafinyeleli ebudaleni: ngenkathi ukudoba ngokweqile kunciphise inani lesardard, usawoti wamanzi ushintshe imizila yama-sardine nama-anchovies, ngakho-ke njengoba kusikiselwe onobuhle babaphenyi, amazinga okuzala angaphansi ngama-50% kunalawo abengaba nawo uma bekwazi ukondla njengoba kwenza izizukulwane zabo ezedlule.
Umcwaningi uRichard Sherley ulinganisa iphengwini osemusha wase-Afrika.
Isithombe - UTimothee Cook
I-penguin yase-Afrika yisilwane esisengozini yokuqothulwa. Ukuyivikela, abacwaningi bahlongoza ukudala izindawo lapho bengeke babhajwe khona, bakhe izindawo ezibiyelwe ngezindawo zokudoba ukuze ama-penguin akwazi ukondla, noma andise inani lama-sardine.
Ngokwengxenye yakhe, uhulumeni waseNingizimu Afrika uhlela ukusebenzisa imikhawulo yokudoba, okungenzeka ukuthi izuze le nyoni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » 'Ugibe lwezemvelo' lungabulala iphengwini lase-Afrika